Votani ngobuhlakani - Mugabe | isiZulu
Votani ngobuhlakani - Mugabe
Ufuna kuvotwe ngoMashi uMugabe
UMugabe ushiye angalazi ku-UN
Kukhalwa ngosuku olunqunywe nguMugabe
Cape Town - Abantu baseZimbabwe babhekane nohulumeni ongaqondile ngokuyikho iminyaka emine egcwele, kusho uMengameli wezwe uRobert Mugabe ngesikhathi enxenxa abantu ukuthi bavote ngobuhlakani uma sekuyiwa okhethweni ngoMashi ngonyaka ozayo.
Iphephandaba iHerald online libike lathi lo mholi oneminyaka engu-88 ubudala, ukhulume nezindimbane zabantu baseHwange, ezama ukugcizelela ukuthi bangavumeli kube nohulumeni obusa ngokuhlanganyela ngemuva kokhetho.
Ngemuva kokhetho lwango-2008, kwabheduka udlame eZimbabwe, kwaze kwaphoqeka ukuthi izwe libuswe ngokubambisana phakathi kweqembu likaMugabe nelikaNdunankulu uMorgan Tsvangarai, iMovement for Democratic Change.
UMugabe uthi uqhekeko olukhona phakathi kwawo womabili amaqembu, selufike lakhona kungeke kusasebenzeka kubhekwe izinto ezizokhulisa izwe.
"Siwubonile umnotho wakwaBulawayo wehla. Sibonile nemboni yezolimo nayo ifadalala, uNgqongqoshe wezeziMali uTendai Biti, naye angafakaza, ayikho imali," kusho uMugabe.
Owesilisa uxoshelwe ukukhuleka isikhathi eside esontweni
Ukuholwa wuMoya oyiNgcwele uma ethandaza sekumngenise enkingeni owesilisa okhonza ebandleni iChristian Brethren Church, eMagubheleni, eSwazini.
Intukuthelo kuphela izithako zokwenza ubhiya eZimbabwe
Bekunemvunge ezinkundleni zokuxhumana eZimbabwe kulandela ukuthi inkampani enkulukazi ekhiqiza iziphuzo, iDelta Corporation, iveze ukuthi ziyaphela izithako zokwenza ubhiya nonemenaydi.
'Kukhona konke lokhu, angikhonondi,' kusho umakoti olunywe yingwenya esezoshada
Owesifazane waseZimbabwe osinde ehlaselwa yingwenya sekusele izinsuku ezimbalwa kube wusuku lwakhe lomshado, uthi "akakhonondi" ngalutho.
Port Elizabeth - 18:55:20 PM HEAVY TRAFFIC towards Kwadwesi Ezinye zasemigwaqeni